Kenya Iyo Alshabaab Oo Si Iskhilaafsan Uga Hadlay Gaari Miino Kula Qaraxda Gudaha Kenya – Radio Damal
Kenya Iyo Alshabaab Oo Si Iskhilaafsan Uga Hadlay Gaari Miino Kula Qaraxda Gudaha Kenya
Ugu yaraan shan iyo toban ka tirsan maleeshiyada Al -Shabaab ayaa shalay ku dhintay weerar loo adeegsaday Walxaha Qarxa (IED) oo ka dhacay Lamu oo u dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya, sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada KDF ee dalka Kenya.
Guud ahaan dadkii saarnaa gaariga ayaa isla goobta ku dhintey halka gaarigana uu gebi ahaanba gubtay.
“Baabuurka ayaa dul maray miinada dhulka lagu aaso taas oo dishay 15 -kii saarnaa isla goobtii Lamu ee u dhow xadka Soomaaliya,” ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay Esther Kioko, afhayeenka ciidamada Kenya (KDF).
Bayaanka ayaa lagu sheegay in dhacdada ay ka dhacday 9:30 subaxnimo inta u dhaxaysa Sarira iyo Ras Kiamboni oo u dhow Ishakani ee Gobolka Lamu.
Sida uu sheegay Kioko, miinada dhulka lagu aaso ayaa la dhigay waddada dagaalyahannada Al-Shabab. Waxay u muuqataa in dagaalyahannada Al-Shabaab ay si ulakac ah u dul mareen.
Goobta uu falku ka dhacay ayaa waxaa ku sugnaa ciidamo boolis ah oo aad u badan.
Muddooyinkii la soo dhaafay, warbixinnada sirdoonka Kenya waxay sheegeen in dagaalyahanno aad u badan ay ku sugan yihiin xadka Kenya iyo Soomaaliya iyo gudaha gobolka Waqooyi-bari ee ballaaran.
Wali ma cadda cidda ku aastay miinada, taas oo soo afjartay nolosha mintidiinta. Si kastaba ha ahaatee, Al Shabaab ayaa lagu yaqaan inay adeegsadaan walxaha qarxa, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari.
Bayaan dhowaan soo baxay, Sirdoonka Istiraatiijiga ah, oo diiwaangeliya hawlgallada Al Shabaab iyo weerarada ka dhaca gobolka Bariga Afrika, ayaa ku sheegay in hay’adaha Ammaanka Kenya ay taxaddar muujiyaan, gaar ahaan gobollada Mandheera, Wajeer Lamu iyo Gaarisa oo argagaxsan u nugul.
Hase yeeshee, Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa beeniyay in dagaalyahanadooda ay dhinteen iyagoo dul maray miinooyinkooda.
Warbaahinta xiriirka la leh kooxda Alshabaab ayaa lagu sheegay in ay ahaayeen shan iyo toban askari oo Kenyan ah dadka ku dhintey qaraxa miinada.